Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Silig News » Ganacsade Shiinees ah oo ku sugan Tonga ayaa ka warbixiyay xaaladda jasiiradda hadda
Ganacsade Shiinees ah Yu Hongtao ayaa ku sugan Tonga. Intii lagu guda jiray wareysiga uu siiyay CGTN, wuxuu sheegay in boodhku uu yaallo meel kasta oo jasiiradda ah ka dib markii uu foolkaanada ka dillaacay.
"Waxa aan arkay ilaa hadda waa in qof walba uu ku lug leeyahay samatabbixinta degdegga ah iyo hawlaha gargaarka musiibada," Yu ayaa yidhi. "Ku dhawaad ​​qof kastaa wuxuu xidhan yahay maaskaro. Dambaska foolkaanaha ayaa yaalla waddooyinka sababtoo ah dambaska ayaa socday dhowr saacadood. Dhulka waxa qariyay dambas, oo ay ku jiraan dhir iyo guryo dadka.
"Qaar ka mid ah mutadawiciinta ayaa nadiifinayey waddooyinka, laakiin weli kuma jiraan kaynta. Dadku hadda ayay waddooyinka nadiifinayeen,” ayuu yidhi.
Marka la eego xaaladaha nololeed ee ay ka mid yihiin biyaha, korontada iyo sahayda cuntada ee Tonga, Yu arrimuhu sidii hore kuma soo laaban weli, balse meelaha qaar waxaa ka soo raynayay.
Waxa uu sheegay in koronto ay ku soo celisay degaano badan maalin gudaheed ka dib markii ay korontadii ka baxday. Sidoo kale, markii waagu beryay, maalintii uu qaraxu dhacay, qof kastaa wuxuu ku soo noqday sahaydii.
"Shaqsi ahaan waxaan kaydsaday biyo ka dibna cunto iyo biyo badan," ayuu yidhi.
"Waxaan halkan ku haynaa sahay nagu filan. Ma jiraan wax biyo ah oo caagadaha ah hadda laga helo dukaamada waaweyn, laakiin sahay kale ayaa weli diyaar ah.
Khudaarta hadda lama heli karo. Yu wuxuu sheegay in saaxiibkiis oo ka shaqeeya beeraha uu u sheegay in dadka jasiiradda ku nool aysan heli doonin khudaar daray ah in ka badan hal bil. Dhanka miraha, wuxuu yidhi, "Ma jiraan wax badan oo jasiiradda ah, marka la bilaabo, kaliya qaar ka mid ah qaraha. Laakiin xitaa tani hadda way gabaabsi noqotay.”
"Uma malaynayo in noloshu caadi ku soo noqotay," Yu ayaa u sheegay CGTN.
Wuxuu sheegay in Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka uu ku soo rogay xaalad deg deg ah, dadka reer Tongana ay ku biirayaan gurmadka masiibooyinka iyo nadiifinta dambaska folkaanaha ee waddooyinka.
"Haddii aan la nadiifin, hawada ayay dib ugu soo duuli doonaan marka baabuurtu dhaafto, waxayna ku degi doonaan saqafyada dushooda," ayuu yidhi.
"Cabitaanka biyaha Tonga waxay si toos ah uga yimaadaan roobka. Qoys kasta waxa saqafkiisa lagu rakibay qalab-qaadaha biyaha roobka ah, markaa waa in aanu hubinaa in dhammaan dambaska la nadiifiyey”.